MACLUUMAADKA EYGA EE CUNISTA DAHABKA AH EE DAHABKA AH IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Eyga ee Cunista Dahabka ah ee Dahabka ah iyo Sawiro
Hadley The Golden Retriever oo 6 jir ah
The Golden Retriever waa eey adag oo dhexdhexaad ah. Qalfoofku waa ballaadhan yahay, muusiguna waa toosan yahay, waxyarna waa lagu taabanayaa joogsi si fiican loo qeexay. Sanka waa madow ama madow bunni ah. Ilkaha waxay ku kulmaan qaniinyada maqaska. Indhaha dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn waa bunni madow. Dhegaha oo aad u gaaban ayaa hoos u laalaada meel u dhow dhabannada. Markii horay loo jiido caarada dhegta waa inay dabooshaa isha oo keliya. Dabo ayaa dhumuc weyn salka la leh baalash dhinaca hoose. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Koodhka biyaha u adkaysta waa cufan yahay oo leh dhogor adag oo toosan ama toosan. Waxaa jira baalal aan laxakameynin oo salka hoose, dhabarka lugaha, qoorta hore iyo dabada hoosteeda. Midabka jaakadu wuxuu ku yimaadaa kareem dahab dahabi ah.
Kuwani waa kuwo la jeclaan karo, edeb leh, eeyo caqli badan oo soo jiidasho leh. Waxay kala yihiin si fudud loo tababaray , oo had iyo jeer dulqaad leh oo u roon carruurta. Soo jiidasho leh, u heellan oo isku kalsoon, iyagu waa eey qoys caan ah. Firfircooni iyo kalgacal, Soo Celiyayaasha Dahabka ah waxay ku raaxaystaan ​​ka farxinta sayidyadooda, sidaa darteed tababarka adeeciddu wuxuu noqon karaa mid aad u wanaagsan. Waxay ku fiicnaadaan tartamada. Si saaxiibtinimo leh qof walba, oo ay ku jiraan eeyaha kale, Dahablaha Dahabka ahi aad ayuu u yar yahay, haddii ay jiraan, dareenka ilaaliya. In kasta oo aysan u badnayn in ay weeraraan, Goldens waxay sameeyaan ilaaliyaal wanaagsan, iyagoo cod dheer ku muujinaya habka shisheeyaha. Noocani wuxuu u baahan yahay inuu ag joogo dadka muujiya hoggaanka in la faraxsanaado. Dahablaha Dahabka ah wuxuu noqon karaa mid wax dumiya oo ama / ama sarreeya, ka badbadis badan oo aan la mashquulin karin haddii maalin kasta uu ka dhinnaado jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . Hubso inaad ahaato mid eeygan adag, laakiin deggan, kalsooni leh, hoggaamiye xirmo isdaba joog ah si aad uga fogaato arrimaha anshaxa . Qaar ka mid ah awoodaha Dahabka ayaa ah ugaadhsiga, raadinta, soo celinta, ogaanshaha mukhaadaraadka, firfircoonida, u hoggaansamida tartanka iyo qabashada tabaha. Eeyadan ayaa sidoo kale jecel dabaasha.
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (56 - 61cm) Dumarka 20 - 22 inji (51 - 56 cm)
Miisaanka: Eyda 60 - 80 rodol (27 - 36 kg) Dumarka 55 - 70 rodol (25 - 32 kg)
U janjeera kansarka oo ay ka mid yihiin burooyinka unugyada . Sidoo kale u nugul cudurka dysplasia, cudurka Von Willebrand, dhibaatooyinka wadnaha iyo cilladaha indhaha ku dhasha. Xasaasiyadda maqaarku waxay ku badan tahay Dahabka Dahabka ah waxayna badanaa u baahan tahay daryeel caafimaad xoolaha. Culeyskaagu si fudud haku badin.
Noocani kuma fiicnaan doono aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan daarad dhexdhexaad ah ama weyn.
The Retriever Dahabka ah ayaa loo baahan yahay in la qaato maalin kasta, kacsan, socod dheer . Intaas waxaa sii dheer, waxay jecel yihiin inay soo ceshadaan kubadaha iyo alaabada kale ee ay ku ciyaaraan. Hubso inaad si fiican u jimicsatid eeygan si aad uga fogaato sarreynta.
Cadayashada joogtada ah ee jaakada dheer ee dheer waxay ku hayn doontaa xaalad wanaagsan, laakiin taxaddar dheeri ah ayaa loo baahan yahay marka eeyga uu daadinayo jaakaddiisa cufan. Shanlee oo ku caday burush adag, adoo si gaar ah ugu fiirsanaya jaakad cufan. Si joogto ah u qalaji shaambo, laakiin maydh kaliya markii loo baahdo. Noocani waa celcelis daadiya.
Isaga oo ka soo jeeda buuraleyda Scottish-ka dabayaaqadii 1800-meeyadii, Golden Retriever waxaa soo saaray Lord Tweedmouth, isaga oo ka tallaabaya jaalaha asalka ah ee Flat-Coated Retriever. bakhtiyey Tweed Water Spaniel . Markii dambe ayuu ka gudbay Dhiigbax , Dejiye Irish iyo inbadan oo Tweed Water Spaniel ah. Eeyaha waxaa loogu yeeri jiray Kabaha Dahabka ah ee Dahabka ah mar dambena waxaa loo bixiyey magaca 'Golden Retriever'. The Golden Retriever waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee maanta la yaqaan, kaliya maahan asxaabta qoyska laakiin kaliya tartamada adeecida, ugaarsiga iyo raadinta, sida shimbiraha dhulka iyo biyaha labadaba, baaritaanka mukhaadaraadka, eeyga adeegga naafada, hagaha indhoolaha iyo sida ey daaweyn ah. The Golden Retriever waxaa markii ugu horeysay aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1925.
Spencer The Retriever Golden oo ah 3 jir jira— 'Spencer wuxuu jecel yahay inuu booqdo godka biyaha ee deegaanka. Wuxuu ka boodayaa carada dhoobada ah ee 8 cagood oo dheer biyaha. Haddii aad ul ku tuurto biyaha wuu ku boodayaa wuuna kuu soo qaadayaa. '
Rigel ee Hawlgabka Dahabka ah ee 9 sano jir
Dosporuno Hawl-gabka Dahabka ah ee 5 bilood jira— 'Waad salaaman tahay, waan qorayaa maxaa yeelay waxaan dhowaan qaatay 5 bilood jir Dahab ah. Si aan runta u sheego waan ka baqay inaan sameeyo tan iyo markii inaadeerkay qaatay a Labrador eey raadinaya waana sheydaan. Sababta aan u argagaxay waxay ahayd aniga oo aanan doonaynin in eey aan la xakamayn karin ila joogo. Kadib baaris dheer iyo aqrin iyo daawashada fiidiyowyo iyo inbadan, waxaan la kulmay boggaaga. Inaad la shaqeysay fardo oo aad isticmaasho hababka Monty Robert ee fardooley dabiici ah , Runtii waan ku faraxsanahay inaad leedahay mowduucyo la xiriira eyga. Waxaan ku dabaqayaa qaababkaaga eyga waxayna u shaqeeyaan sidii soo jiidasho. Hadda waxaan garwaaqsaday in dhibaatada inaadeerkay ay tahay in qoyskiisu u ogolaadeen eeyga inuu noqdo alfa 'xirmadooda' (reerkooda) waana taas sababta xayawaanka aan loo xakamayn karin. Erayadan kooban waxaan isku dayayaa inaan idhaahdo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waayo waayo-aragnimadayda eeydayda ayaa aad uga sii xiiso badan hadda markaan si fiican u fahmay eeyaha iyo sida loo maareeyo xayawaanka. Taasi xitaa luqadda jirka caqli ku ah eey u dhaqmo oo wuxuu akhriyaa si ka duwan innaga. Waxaad ka dhigtay waayo-aragnimadayda mid aan la rumaysan karin oo wax u muuqda tartan ayaa isla markiiba noqday mid lagu raaxeysto, madadaalo iyo faa'iido badan. Waxaan horeyba ula wadaagay boggaaga asxaabteyda iyo qoyskeyga eyda leh waxaanan hubaa inaad sidoo kale caawin weyn u noqon doontid iyaga. Aad ayaad u mahadsantahay! Juan Jose '
Marley waa tan 'Golden Retriever'. Waxay kaliya jirtaa 10 bilood sawirka, waana eeyga ugu yaabka badan ee aad weydiisan karto. Sida inta badan Dahabiyeyaasha Dahabka ah, waxay jeceshahay biyaha. Iyadu waa eey aad u dhaqan wanaagsan oo gurigeeda iyo socodkeedaba ah, gaar ahaan hadda oo aan u tababaray dhinacayga ku orod, hooga iyo dusha hoggaanka . Hada waa 1 sano jir waxaana dhawaan la baray wax yar Ey Beagle ah oo loo yaqaan CoCo . Marley waa eeyga ugu naxariista badan, ugu jecel eey kasta oo kale, gaar ahaan Coco, waana mid aad u jilicsan inta uu la ciyaarayo. Soo Celinta Dahabiga ah runtii waa nooc cajiiba. '
'Portia waa labo jir da' dahab ah. Waxay ka buuxdaa tamar iyo farxad inay ag joogto. Iyadu waa waalan tahay qosol, iyo wehel la yaab leh iyo saaxiib. Waxaan ka codsaday dhowr farsamooyinka tababbarka Cesar Millan Portia. Midka saameynta ugu weyn ku yeeshay wuxuu ahaa inaan lagu qeylin marka la saxayo, laakiin lagu hadlo cod hoose, oo adag. Adiga oo ah milkiilaha eyga, way adagtahay inaad xasillooni yeelato markii eeygaagu calalinayo kabaha aad jeceshahay! Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaaday in dhibaatada si aad ufiican loo xaliyo markaan saxo iyada oo aanan kor u qaadin codkayga.
'Portia waa eey cajiib ah. Dabeecaddeedu waa mid cajiib ah oo iyadu aad bay u macaan tahay. Weligay yeelan maayo nooc kale oo eey ah! '
eyga buurta bernese iyo retriever dahabka
'Waxaan ku qaaday sawirkan guriga. Sawirka, waxay si xushmad leh ku sugayaan fadhi ay u fadhiyaan buskud. Bidix ilaa midig: Badmaaxe iyo Cusbo. Waxay yihiin 7-jir dahaaran oo midab kareem leh oo Dahab ah. Milkiilahoodii hore ayaa u helay caruurtiisa laakiin durba xiisihii ay ka qabeen iyaga ayaa ka lumay. Markii eeyadu 3 jirsadeen milkiilihi hore ayaa na siiyay sababtoo ah wuxuu dareemay inuusan awoodin inuu siiyo daryeelka ay u baahan yihiin. Labaduba waa eeyaha ugu fiican ee aan waligeen soo aragnay oo si layaableh ayaa loo hagaajiyay. Runtii waxaan dhihi karaa labadoodaba way isku dheelitiranyihiin mana lahan hal arin oo dhaqan ah. Labaduba waxay jecel yihiin biyaha oo way dabaashaan maalinta oo dhan. Waxay sidoo kale iskudayaan oo marmar ku guuleystaan ​​inay soo qabtaan kalluun yar oo webiga iyo harada ah oo aan u qaadno qiyaastii 3 ilaa 5 jeer usbuucii si aan ugu oggolaano inay ciyaaraan oo ay gubaan tamarta. '
'Laba walaalo oo ah Ciyaaraha Caan ka noqoshada Dahabka ah oo fadhiya fadhiisinkooda wanaagsan ee ardaaga, iyagoo raadinaya kaamirada quruxdeeda-dhanka bidix waa Little Du, oo 5 sano jir ah, dhanka midigna waa Rocky, 6 jir. Rocky waa Ey daaweyn ka diiwaangashan Delta Society wuxuuna booqdaa guryaha daryeelka iyo isbitaalada. Dutchy wuxuu bilaabayaa tababarkiisa jiilaalka. Labaduba waxay sameeyeen fasalo firfircoon sidoo kale waxaa aad u jecel qoyskooda aadanaha. Woof! '
'Tani waa ilmahayga, hankayga iyo farxadayda. Magaceedu waa Sierra. Sierra waa daahir daahir Dahab ah. Ninkayga iyo aniga waxaan wada joognay 18 sano 17 ka mid ah waxaan ka baryay inuu helo eey. Aakhirkiina wuu is dhiibtay ugaarsiguna waa bilaabmay. Wuxuu ka cagajiidayay inuu helo eey maxaa yeelay waxaan daganeyn guri dabaq ah (waxaan ku noolahay guri hada) waxaanan shaqeynay maalintii oo dhan. Uma maleyneynin inay ku habboon tahay eyga. Waa wax lagu qoslo maxaa yeelay markii aan helnay waxay ahayd Nofeembar oo qof ayaa xusay, 'Dog Whisperer' sidaa darteed waxaan bilaabay daawashadiisa. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan sameeyay. Wax badan ayaan ka bartay isaga. Waan duubi jiray, markaan shaqada ka soo laabto, ka dib socodka Sierra waxaan fadhiisan jirnay oo daawan jirnay (isla markaana wada ciyaari lahayn) Sabirka aan ka bartay ninkaas. Way adkayd in yar yar la koriyo 30 sano ka dib oo aan mid la helin. Waxaan ku soo koray eey iyo bisad. Waxa ugu weyn ee i caawiyay waxay ahayd xusuusta ku celcelinta iyo ammaanta. Sierra waxay ahayd arday si dhakhso leh wax u barta. Ma aha qayb ka mid ah alaabta gurigayaga ama kabaha ama wax helay calalin . Sierra si fiican ayey ula qabsatay. Aad bay u dabeecad wanaagsan tahay. Waxay jeceshahay inay cagahayaga isku laabto mana oran kartid ereyga “gaari xamuul ah” iyadoon iyadu u cararin xagga dambe ee magaalada si ay safar ugu raacdo. Maaddaama ay ilmo ahayd waxaannu geynnaa meel kasta oo nala jooga. Waxaan helnay wax cajiib ah park eey inay jeceshahay inay ku ciyaarto. Waxay ka timid a qashin ka kooban 5 ey markii aan u tagnay inaan soo qaadno ayaan sameeyay dhaqaaqida farta si aan u arko midka dhug u yeelanaysa oo iyadu waa tii. Way caqli badan tahay waxayna ii keentaa farxad sidan ah maalmaha kale ee aan farxadda lahayn. Kaliya iyada oo iiga salaameysa albaabka 'Shan Sare' ayaa ifaysa maalintayda. Waxaan nasiib u helnay Sierra. Ninkayga oo aan eey rabin wuu ku fiican yahay iyada. Wuxuu jecel yahay inuu geeyo jardiinooyinka oo uu lasocdo. Waxaan u maleynayaa inuu wax ka yiri iyada oo ah magnet digaag. LOL, waan sii socon karaa oo waan sii socon karaa. '
'Kani waa Casey, ilmahayga la jecelyahay, ee kareemka midabka leh leh ee da' 12 bilood jira. Iyadu waa cutie ah. Waxay jecel yahay wax ka badan a duurka ku orod subixii iyo fiidkii, iyo markay is daasho markay is daasho. Waxay jeceshahay cayrsashada kubbadaha iyo ulo waxayna ciyaari kartaa maalinta oo dhan. Waxay jeceshahay raaxadeeda, sidoo kale, inkasta oo ay weynaato weyn! Waxay ogtahay amarro badan, fadhiiso, joog, sug, jiifso, wareejiso, ka tag, u soconayaa ciribta oo waa mid deggan oo addeec badan. Iyadu waa mid aad u jecel oo kalgacal leh waxayna si fiican ula dhacdaa xayawaanka kale oo dhan. Runtii waa wax yar jawharad. '
Dahabiyeyaasha Dahabka ah ee Hunter (bidix) iyo Max (midig) oo fadhiya barxadda barxadda
Jack, oo ah Dhaxal-sugaha Dahabka ah eey yar oo ah 11 toddobaad jiifay agtiisa weelkiisa cuntada
Jack, oo ah Dhaxal-suge Dahab ah dhammaantood wuu koray!
Sadie iyada oo ku labbisan dharkeeda eeyaha-Sadie waxay tagtaa isbitaalada iyo guryaha kalkaalinta si ay u soo booqato dadka waxayna jeceshahay shaqadeeda. Waxaa halkaan lagu muujiyay iyada oo jirta 1 ½ sano jir.
Eeg tusaalooyin dheeri ah oo ah Hawl-gabka Dahabka ah
Sawirrada Dahabka Dahabka 1
Sawirrada Dahabka Dahabka ah 2
Sawirrada Dahabka Dahabka ah 3
Sawirada Dahabka Dahabka 4
Sawirrada Dahabka Dahabka 5
Sawirada Dahabka Dahabka ah 6
Eeyaha Wax Cunista Dahabka ah: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
pitbull buluug qasan bulldog Maraykanka
weli Bernard iyo isku dhafka adhijir Jarmal
dachshund puppy puppy ee iib ah
madow labrador retriever pitbull mix